Nagarik Shukrabar - स्वस्थ सन्तान जन्माउन
स्वस्थ सन्तान जन्माउन
आइतबार, ०३ बैशाख २०७४, १२ : ५९ | शुक्रवार , Kathmandu
–डा. योगी विकासानन्द
बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सम्भोगमा बाबुआमाको कस्तो मुड वा मनस्थिति छ भन्ने कुरामा धेरै निर्भर हुन्छ । हामी गर्भावस्था, बच्चाको जन्म र बच्चाको बाल्यकालको विषयमा चनाखो हुन्छौँ । तर, गर्भाधानको विषयमा खासै चर्चा गर्दैनौँ । सक्षम, सबल र क्षमतावान् सन्तान जन्माउने हो भने गर्भाधानकै समयबाट ख्याल गर्नुपर्छ ।
दृष्टिविहीन धृतराष्ट्र र रोगी पाण्डु जन्मिनाले महाभारत युद्धको आधार तयार भयो । यदि उनीहरू शारीरिक रूपमा सबल जन्मिएका भए सायद महाभारतको युद्ध नहुन पनि सक्थ्यो । दुई जना कमजोर मानिस जन्मिनाले करोडौँ मानिसको मृत्य हुने युद्ध भयो । यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शारीरिक वा मानसिक रूपमा कमजोर जन्मिएको बालक कुनै पनि ‘पावर प्वाइन्ट’मा पुग्यो भने त्यसले धर्तीमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ । तसर्थ धर्तीलाई समृद्ध र शान्त बनाउनु छ भने स्वस्थ्य बच्चा जन्माउनैपर्छ ।
धृतराष्ट्र र पाण्डु किन त्यस्तो जन्मिए भन्ने विषय पनि महाभारत कथाले उद्घाटित गरेको छ । महाभारतको कथाअनुसार राजा विचित्रवीर्य निःसन्तान मरेपछि राज्यमा उत्तराधिकारीको संकट पर्छ । तत्पश्चात् विचित्रवीर्यकी आमा रानी सत्यवतीले विवाहपूर्व नै सूर्यमार्फत आफूले जन्माएको छोरा व्यासलाई विचित्रवीर्यका रानीहरू अम्बिका र अम्बिालिकालाई गर्भधान गर्न आग्रह गर्छिन् । वेदव्यासले मातृ आज्ञा स्विकार्छन् र विचित्रवीर्यकी रानीहरू अम्बिका र अम्बालिकालाई ऋतुदान गर्न तयार हुन्छन् ।
वेदव्यासलाई नियोगका लागि दरबारमा बोलाइन्छ । अम्बिका वेदव्यासलाई देखेर डराइन् । उनको डर स्वाभाविक पनि थियो । कहाँ दरबारकी रानी, कहाँ दाह्री पालेको डरलाग्दो साधु ! डरले आत्तिएर अम्बालिकाले व्यासलाई हेर्न समेत सकिनन् । वेदव्याससँगको उनको सम्भोग कष्टपूर्ण रह्यो । सम्भोग अवस्थामा भयका कारण आँखा चिम्लिएकाले धृतराष्ट्र दृष्टिविहीन जन्मिए । अम्बालिका पनि व्याससँग डराइन् । उनी डरले थरथर भइन् । जसका कारण पाण्डु जन्मजात नै रोगी भए । दुई सन्तान कमजोर भएपछि रानी सत्यवतीले फेरि व्यासलाई बोलाइन् । यसपटक अम्बिका वेदव्याससामु गइनन् । बरु आफ्नी दासीलाई सिँगारेर पठाइन् । दासीले वेदव्याससँगको सम्भोगलाई आयोजन वा अवसरका रूपमा ग्रहण गरिन् । जसका कारण विदुरजस्ता महानतम ज्ञानी सन्तान जन्मिए ।
यो कथा हामीले कैयाँै पटक सुनेका छौँ । तर, यसको विषयमा हामीले गहिरोसँग सोच्ने गरेका छैनौँ । सम्भोगका समयमा विभिन्न रसायन क्रियाशील हुन्छन् । वीर्य आफैँ पनि विभिन्न रसायनहरूको जोड हो । अम्बिका र अम्बालिकामा डरका कारण सम्भोग समयमा सक्रिय हुनुपर्ने आनन्द, सन्तुष्टि र खुशीका रसायन ‘रिलिज’ भएनन् । बरु त्रास, भय र कष्टसँग सम्बन्धित रसायनहरू सक्रिय भए । जसको असर बच्चामा प¥यो । तसर्थ बच्चा कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण सम्भोगमा बाबुआमाको कस्तो मुड छ भन्ने कुरामा धेरै निर्भर हुन्छ । हामी गर्भावस्था, बच्चाको जन्म र बच्चाको बाल्यकालको विषयमा चनाखो हुन्छौँ । तर, गर्भाधानको विषयमा खासै चर्चा गर्दैनौँ । यदि सक्षम, सबल र क्षमतावान् सन्तान निर्माण गर्ने हो भने गर्भाधानकै समयबाट ख्याल पु¥याउनुपर्छ ।
हामी यस संसारमा आउनुभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा थियौँ । आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि बाबुको शुक्रकीटमा थियौँ । शुक्रकीटका रूपमा आउनुभन्दा अगाडि हामी ‘भाइब्रेसन’का रूपमा ‘साइबर स्पेस’मा थियौँ । किनकि, चौध वर्षभन्दा अगाडि कुनै पनि पुरुषको शुक्रकीट बन्दैन । शुक्रकीट ‘युनी सेल’ हो । नारीको डिम्बमा मिलेपछि युनी सेल बहु सेल बन्छ र बच्चा निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
हामीलाई हाम्रा आमाबुबाले साइबर स्पेसबाट ‘डाउनलोड’ गरेका हुन् । यसरी हेर्दा सेक्स भनेको डाउनलोडिङ प्रक्रिया हो । यही डाउनलोडका कारण हामीहरू संसारको ‘स्क्रिन’मा आउँछौँ । एक दिन हामी मर्छौं । हाम्रो शरीर नष्ट हुन्छ । तर, ‘कन्ससनेस’ (चेतना) फेरि साइबर स्पेसमा ‘अपलोड’ हुन्छ । संसारमा आएपछि कसैको चेतना परिमार्जित वा व्यापक हुन सक्छ त कसैको पतन वा निकृष्ट हुन सक्छ । पतन वा परिमार्जन जे भएको छ, सोहीअनुरूप नै कन्ससनेस साइबरमा अपलोड हुन्छ । त्यो अपलोड भएको कन्ससनेसलाई फेरि अर्काे महिला–पुरुष जोडीले सम्भोगमार्फत डाउनलोड गर्छ र फेरि नयाँ सृष्टिको सुरुवात हुन्छ । यो प्रक्रियालाई हामीले राम्रो गरी बुझ्न आवश्यक छ । साइबरमा असंख्य कन्ससनेसहरू छन् । कुनै समृद्ध छन् त कुनै निकृष्ट छन् । सम्भोगको अवस्थामा आमाबाबुको मुड जस्तो बन्छ, त्यस्तै चेतना (आत्मा) गर्भमा आएर बस्छ । यदि आमाबाबुको खुशीको मुड छ भने खुशीको चेतना डाउनलोड हुन्छ, यदि डराएको मुड छ भने डराएर बसिरहेको चेतना डाउनलोड हुन्छ । हामीले यो प्रक्रियालाई बुझ्न नसक्दा हामीहरू धृतराष्ट्रजस्ता मूर्ख र पाण्डुजस्ता कमजोर सन्तान जन्माउन अभिशप्त छौँ । यदि समृद्ध मानव सभ्यता निर्माण गर्ने हो भने परिवार र स्कुल सुधारेर मात्र पुग्दैन । सम्भोग प्रक्रियामा नै सुधार गर्नु जरुरी छ ।